We Fight We Win. -- " More than Media ": လယ်သမားတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားများ သွေးစည်းညီညွတ်ကြ
လယ်သမားတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားများ သွေးစည်းညီညွတ်ကြ
မြန်မာ နိင်ငံရဲ့ လူဦးရေ သန်း ၆၀ မှာ တိုင်းပြည်လူဦးရေရဲ့၇၈ ရာခုိုင်နှုန်းဟာ ကျေးလက်နေပြည်သူတွေ ဖြစ်တယ်။
မြန်မာ နိင်ငံရဲ လူဦးရေ ၅ သုံ ၃ပုံဟာလဲ တိုင်းရင်သားတွေဖြစ်တယ်။
လယ်သမား တွေအကြောင်း၊ တိုင်းရင်သားတွေအကြောင်း ကို မပြောရင် ဘယ်သူအကြောင်းကိုပြောမလဲ။
လယ်သမားတွေနဲ့ တိုင်းရင်သားတွေ တိုက်ပွဲ ကို မထောက်ခံရင် ဘယ်သူတိုက်ပွဲကိုထောက်ခံမလဲ။
လယ်သမား တွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေမှာ ခေါင်းဆောင်မရှိတော့ဘူး။ ဘယ်ခေါင်းဆောင်ကို မှအားမကိုးလို မရတော့ဘူး ဆိုတာ
လက်ပတောင်းတောင်တိုက်ပွဲ နဲ့ လိုင်ဇာတိုက်ပွဲတွေ က သက်သေပြခဲ့ပြီ။ ကိုယ်အားကိုကိုယ်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်။
လယ်သမား များ ၊ တိုင်းရင်းသားများ အစွမ်းကုန်သွေးစည်း ညီညွတ်ကြ။
ကိုယ်မြေကိုယ်ယာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ကြ။ ကိုယ်ပြည်နယ်ရရှိဖို့ အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ကြ။
you shouldn't say like that....you should be wise.....don't look only onethings...we should to look to all over the country....we trying to peace.Not for fighting.....we always fight we never win....we don't have forgetness.....we never win.....you should change your desire...Do you think your the best?If you don't think,you just fellow..we got one good leader..don't miss it..ko moe thee....you should to understanding by MIN GALAR DAMA.........haveanice day
Yes we don't haveagood leader to fit with this condition but we have only burtural moethezun and military junta for that.
16 March 2013 at 22:35
But we still have burtual moetheezun and his group.
we have to eradicate them out from the world not only from myanmar.